Janoary 2020 | RayHaber | raillynews
Volana: Janoary 2020
Miaraka amin'ny Rafitra fanangonana elektronika elektronika ampiasain'ny ESHOT, ny fametrahana ny Izmir Metropolitan Munisipaly, dia afaka mameno indray mandeha indray mandeha ny Internet orzmirim Cards amin'ny alàlan'ny fanomezana karatra automatique. Amin'ny fanontaniana [More ...]
Tatvan Rahova Logistic Center Construction Work Tender Resulta Tatvan Rahova Logistics, izay manana fetrany voafetra eo amin'ny 2019 TL ary eo ho eo ny salan'isa TL 611864 an'ny Tiorka State Railway Management (TCDD). [More ...]
Dorn Therapy Specialist Çağla Yüksel, izay nanazava ny fifandraisan'ny fifandanjana eo amin'ny vatana sy ny fiainana ara-tsosialy miaraka amin'ireo atrikasa momba ny fizika, vatana ary mandanjalanja, dia nanome fiofanana ho an'ny mpiasa TÜDEMSAŞ. TÜDEMSAŞ Bekir Torun natao tao amin'ny efitrano fivoriana [More ...]
Vokatra vaovao avy amin'ny KARDEMİR mankany amin'ny sehatry ny lalamby
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) dia nanomboka namokatra vainafo 38Si7 izay natao ho an'ny famokarana rindran-dalamby izay mampifandray ny lalamby miaraka amin'ny matory mivaingana. Ao amin'ny fanambarana nataon'ny orinasa; "Vokatra vaovao misy sanda avo lenta [More ...]
Tsara tarehy izao Cunda Bridge View
Balıkesir Metropolitan Metropolitan dia manolo ny rindrina mivaingana eo amin'ny sisin-by vita amin'ny vy izay manakana ny fijery ao amin'ny Cunda Bridge amin'ny fangatahan'ny olom-pirenena. Olom-pirenena hiampita ny tetezana Cunda, izay nisokatra ho an'ny fifamoivoizana fiara tamin'ny taona 2017, 'te-hahita ny fahitana izahay' [More ...]
Barış Manço Ferry Hanao Fotoana Voalohany Ho An'ilay Artista Tsy hay hadino
Barış Manço Ferry, nohavaozin'ny iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny Kaominina Istanbul Metropolitan, dia hanao ny diany voalohany ho an'ny mpanakanto tsy hay hadino ao anatin'ny faha-21 taonany hahafatesany. Tiorka, izay nandao anay 21 taona lasa izay, miaina ao am-pontsika sy ny fitenintsika miaraka amin'ny hirany, [More ...]
Istanbul metro map 2020: Miaraka amin'ny fananganana metro izay hanomboka amin'ny taona ho avy, miaraka amin'ny tsipika 2030 kilometatra amin'ny faran'ny taona 776, Istanbul no tambazotra metro lava indrindra eto ambonin'ny tany aorian'i New York. [More ...]
Ny toerana tsara indrindra amin'ny fandriampahalemana any Istanbul Eyüpsultan Ny Toeram-pandresena lehibe indrindra Metrobus
Ny Fikambanana ara-pahasalamana ara-tsaina dia nandinika ny fizarana ilay fihetseham-po mifototra amin'ny toerana misy ireo olona ao amin'ny fampiharana 'CheckFeel', ary mametaka ny sarintany misy ny toerana ao Istanbul. Tamin'ny nahatratrarana mpampiasa efa ho 10, ny fihetseham-po dia nizara tany amin'ny toerana saika 150. ny Association [More ...]
Mpandeha YHT miandry ny vahaolana amin'ny olan'ny tapakila
Ireo mpandeha izay mandeha amin'ny lamasinina haingam-pandeha dia tsy hahita toerana na dia te hividy tapakila aza izy ireo andro mialoha. Ny olom-pirenena maniry tapakila dia mila mihetsika haingana toy ny lamasinina! Inona no mihetsika miadana [More ...]
Raha misy olona manontany tena raha misy lamasinina hamakivaky an'i Bursa, eny dia mandalo izany.
Nandalo ny garan-dalamby tao Piribeyler tao amin'ny distrikan'i Büyükorhan, izay 105 km miala ny afovoan-tanànan'i Bursa, nandritra ny 85 taona, ny ankamaroan'ny olona ao an-tanàna kanefa tsy mahalala izany. Ny ankamaroan'ny olona mipetraka ao Bursa dia manana fiaran-dalamby mamaky ny tanàna. [More ...]
Ny fifohana sigara sy fivarotana no andrarana amin'ny bara fiaran-dalamby
Ny fifohana sigara, ny fivarotana sigara sy ny sigara dia voarara tanteraka eny amin'ny toeram-piantsonan'ny fiaran-dalamby ao Holandy ao anatin'ny faritry ny faritra tsy misy fifohana sigara. Amin'ny andro ho avy, hesorina ny departemanta amin'ny fifohana sigara eny amin'ny toby rehetra. Mandra-pahatongan'ny 1 aprily lasa mifoka [More ...]
Fetin'ny Sky Observation Festival Mihetsika mankany amin'ny dimension iraisam-pirenena
Ny "2020 International Sky Observation Festival", izay hampiantrano voalohany ireo mpandray anjara iraisam-pirenena amin'ny 2020, dia hatao amin'ny 20-23 Aogositra 2020 ao Antalya Saklıkent. Fangatahana ho an'ny fankalazana, izay mpankafy astronomer an'arivony no ho farahin'ny maro [More ...]
Fiofanana momba ny fanabeazana saika antikctika no vita
Tiorkia Tendrontany Atsimo iraka natao fa ny Countdown efa nanomboka ny faha-4 siansa. Talohan'ny expedition, izay hanomboka ny 9 febroary, ekipa 24 no nahazo fiofanana momba ny "fahavelomana" amin'ny TİBİTAK Marmara Research Ship. Ny famitana ny fianarany ary hahazoana ny fanamarinana [More ...]
Fangatahana lehibe amin'ny fampiharana latabatra Orange amin'ny YHT Stations
Natao eo ambany fiahian'ny ny Minisitry ny Fitaterana sy ny fotodrafitrasa ny tanjona ny unimpeded mahazo "Accessibility Project ny Mpandeha Transport Services ao Torkia", ny daty Desambra 02, 2019, natomboka amin'ny lalamby fitaterana "Orange Table" teboka fanompoana isan'andro [More ...]